Alignment to Air Izithomba Ze-3D - Umagazini Design
Izithomba Ze-3D Ngokuqondene nopopayi wencwadi yokudala, uJin waqala ngezinhlamvu A. Futhi, uma kukhulunywa ngesinyathelo somqondo, wazama ukubona ukuthambekela okukhanyayo okucabanga ngefilosofi yakhe esebenza ngokuqinile kepha ehlela ngasikhathi sinye. Endleleni, weza namagama angqubuzanayo awamele ngokuphelele umbono wakhe ngandlela thile njengokuhambisana nomoya okuyihloko yalomsebenzi. Unalokho engqondweni, izithombe ziveza izikhathi eziqonde ngqo nezicekeceke egameni lokuqala. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kugcina nge-vibe eguquguqukayo futhi evulekile yokubonisa incwadi yokugcina.
Igama lephrojekthi : Alignment to Air, Igama labaklami : Jin Jeon, Igama leklayenti : Jin Jeon(J2Motion).
Idizayini ye-Movie, yevidiyo neyopopayi
Izithomba Ze-3D Jin Jeon Alignment to Air